Hawlaha shirkadda |
Safarka Maalinta Troy - TAIERZHUANG
Aad bay ugu faraxsan tahay inaan safar maalinle ah la galno dhammaanteen. Taierzhuang Waxaan nahay Xuzhou Troy Co., Ltd. Sida alaab-qeybiyaha baakadaha xirfadleyda ah, waxaan u shaqeynaa shaqo adag, si adag ayaan u ciyaarnaa !!! Si loo nasto, waxaan qabanqaabinnay safar maalin ah oo aan ku tagno Tai'erzhuang, ...
MAXAA LOOGU DOORTAY MUUQAALKA MUUQAALKA MADOW
1.Waxay umuuqataa mid aad uqurux badan.Markaad qabato oo aad ku aragto qorax madhan, midab jilicsan oo jilicsan ayaa soo muuqan doona.Markaas waxay kadhigi doontaa badeecadaada aragga hore. Muraayadda buluugga ah ee 'Dark violet' waa mid ku habboon deegaanka isla markaana leh xasillooni kiimikaad oo hagaagsan. Muraayadda waxay noqon kartaa 100% dib loo warshadeyn karo 3. Muraayad madow oo madow ayaa xannibi karta vi ...
Waxaan u guurey xafiis cusub! Qiimo-dhimista ayaa bilaabmi doonta bisha Ogos, fadlan nala soo xiriir annaga oo lacag la’aan ah